Galaxyo aan caadi ahayn: astaamo, qaabeyn iyo kala soocid | Saadaasha Shabakadda
Waan ognahay inay jiraan waxyaabo kala duwan noocyada galaxies marka loo eego qaab-dhismeedkooda iyo qaab-dhismeedkooda. Halabuurka mid kasta oo ka mid ah falanqeyntu wuu ka duwan yahay tanina waxay ka dhigaysaa inay leedahay astaamo u gaar ah. Maanta waxaan ka hadlaynaa galaxyo aan caadi ahayn. Waa isku duubnaanta xiddigaha, meerayaasha, gaaska, boodhka, iyo walxaha ay isku hayaan xoogagga cuf isjiidadka laakiin muuqaal ahaan ka maqan nooc urur ah.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa dhamaan sifooyinka, sameynta iyo isbedelka galaxyada aan caadiga aheyn.
2 Qaababyada iyo sharaxaadda galaxyada aan caadiga ahayn
3 Noocyada galaxyada aan caadiga ahayn
Galaxyada aan caadiga ahayn waxaa loo yaqaanaa kuwa aan lahayn urur muuqaal ah. LDaraasadaha ayaa qiyaasaya in ku dhowaad 15% galaxies ay yihiin kuwo aan caadi ahayn. Si ka duwan galaxies-ka sida Milky Way iyo Andromeda oo leh bu'da nukleus, disk iyo xoogaa gacmo wareegsan oo si fiican u qeexan, waxaa jira galaxyo aan lahayn nooc nooc iyo qaab dhismeed toona. Qaar ka mid ah waxay leeyihiin baararka halista ah ama gacmo. Laakiin maahan qaab-dhismeed qeexan.
Abaabul la'aanta ah in galaxyada aan caadiga ahayn ay jiraan waxaa loo aaneynayaa sababo dhowr ah. Mid ka mid ah kuwa ugu saameynta badan ee sharraxaya sameynta galaxies noocan ah ayaa ah inuu dhacay qarax weyn. Qaraxa weyni wuxuu ka dhacay xudunta galkacayo waana sababay kala-jajabintu waa kala-firdhin ku dhowaad dhammaan waxyaabaha oo dhan iyada oo aan lumin wada-noolaanshaha oo dhan. Galaxyooyinka aan caadiga ahayn waxaad ka heli kartaa cillad ay sabab u tahay culeyska ay sameeyeen xoogaa galaas kale oo deris ah oo ka weyn.
Waan ognahay in galaxkeenu leeyahay qaab wareegsan oo weynaaday wuxuu qalloociyay laba galaxyo iyo nanas oo lagu yaqaan magaca daruuraha Magellanic. Waxaa la soo jeediyay in labadan galax yare ay ku milmayaan kuweena. Mustaqbalka fog waxaa macquul ah in waxaas oo dhan oo ay ka kooban yihiin ay ka mid noqdaan Milky Way.
Waxaa jira galax kale oo aan caadi ahayn oo caan ku ah inuu aad u iftiimayo. Waxay ku saabsan tahay Cigaal galaxy. Waa nooc ka mid ah galaxy aad u hodan ku ah arrimaha dhexdooda iyo in xiddigaha gudahood ay ku sameysmayaan si xawli ah. Markay da ’yar yihiin, xiddiguhu waa buluug oo aad bay u dhalaalayaan, taas oo sharraxaysa dhalaalka aan caadiga ahayn ee galax-noocan aan caadiga ahayn.
Qaababyada iyo sharaxaadda galaxyada aan caadiga ahayn
Mid ka mid ah astaamaha ay galaxyo aan caadi ahayn uga duwan yihiin kuwa kale ayaa ah iftiinkooda. Oo waa iftiinkaani wuxuu ka yimaadaa tamarta halkii ilbiriqsi ee galagu uu ku sii daayo mowjadaha oo dhan waana mid u dhiganta tirada xiddigaha uu haysto. Galaxyadan aan caadiga ahayn badanaa waxay leeyihiin tiro xiddigo ah oo aad u iftiima.
Midabka galaxyadu wuxuu xiriir la leeyahay tirada xiddigaha. Waxaa jira laba nooc oo dad caan ah. Xiddigaha ka tirsan dadka xiddigta leh Waxaan ahay kuwa da 'yar oo ka mid ah culeysyada culus sida helium-ka oo u badan. Dhanka kale, tirada dadka II waxaa jira qaar walxaha metallicity-ka hooseeya waxaana loo tixgeliyaa inay yihiin xiddigo da 'weyn.
Jadwalka casaanka ah ee xiddigaha waxaan ku arkeynaa in galaxyadu u muuqdaan kuwo leh wax yar ama aan lahayn xiddig xiddigle ah. Nooca galaxiska noocan ahi wuxuu koobay ku dhowaad dhammaan galaxyada elliptical. Taa bedelkeeda, galaxyo leh heer sare oo ah sameynta xiddig ayaa laga helaa aagga ugu buluugsan. Waxaa ka mid ah galaxies-yadaas oo ay ka buuxaan qaab-dhismeed cusub oo xiddig leh waxaan ka heli karnaa Cigar Galaxy oo aan soo sheegnay.
Aagga ugu cagaaran waa gobol kala guur ah oo ay ku kulmaan galaxyo leh dhalinyaro iyo waayeel caan ah. Waxaan dhihi karnaa in Milky Way iyo Andromeda ay tusaale u yihiin galaxyadan oo ka kooban labada bulsho ee xiddigta leh. Noocyadan galaxyada aan caadiga ahayn waa kuwo aad u xiiso badan in la ogaado maxaa yeelay iyagu waa kuwa ugu wada dhan. In kasta oo aysan lahayn qaab cajaa’ib leh, haddana waxay dhihi karaan waxay leeyihiin xarun. Waana in bartamaha galaxyadan ay yihiin heerarka dhalashada xiddigaha ugu sarreeya. Waxa ugu caadiga ah ayaa ah in galaxyo aan caadi ahayn loo tixgeliyo kuwa ugu da'da yar.
Noocyada galaxyada aan caadiga ahayn
Edwin Hubble wuxuu ahaa aqoonyahan cirbixiyeen ah oo masuulka ka ahaa kala saarida galaxyada kaladuwan sida ay u muuqdaan. Ka dib markii uu falanqeeyay taargooyin badan oo sawir leh oo leh galaxyada, wuxuu awood u yeeshay inuu dhiso qaababka aasaasiga ah iyo noocyada kala duwan ee galaxies. Waxaan leenahay elliptical, lenticular, spiral, spiral, iyo galaxies aan caadi ahayn. Kuwa aan caadiga ahayn waa kuwa aan lahayn nooc muuqaal ah oo muuqda. Galaxyada badankood ee ka jira koonku waa kuwo elliptical ama spiral ah.
Sidii aan ka baranay wax ku saabsan galaxies, kala-saarista ayaa la ballaariyay si ay u awoodaan inay u kala saaraan dhammaan qaybahaan aan la kulmin foom gaar ah. Halkan waxaan ku aragnaa nooca I iyo II galaxies aan caadi ahayn. In kasta oo ay jiraan xaddidaadyo, qorshaha Edwin Hubble wuxuu gacan weyn ka geysanayaa aasaasidda astaamaha iyo astaamaha galaxyadan aan caadiga ahayn. Waxaan qeexeynaa maxay yihiin astaamaha nooc kasta:
Nooca I galaxyada aan caadiga ahayn: waa kuwa ay ka muuqdaan taxanaha Hubble ee asalka ah, sida Galaxyada nooca-daruuriga ah ee 'Magellanic'. Waxaa loo tixgelin karaa inay yihiin kuwo isku dhafan oo u dhexeeya galaxyo qulqulatooyin ah oo aan si buuxda u horumarinin dhismaha ama leh qaab dhismeed rudimentary.
Nooca II galaxies aan caadi ahayn: waa kuwa ka kooban xidigo aad u duqoobay oo casaan ah. Caadi ahaan, xiddigahaani waxay u muuqdaan inay leeyihiin iftiin yar waxayna yihiin galaxyo maadaama maadadu mar horeba faafto oo aysan lahayn wax qaab ah.
Waxaan aragnaa tusaalaha daruuraha Magellanic. Waa laba xiddigood oo aan caadi ahayn. Daruurta weyn ee Magellanic waxay u jirtaa 180.000 oo sano oo iftiin ah, halka ta yarna ay u jirto 210.000 oo sano oo iftiin ah. Waxay ka mid yihiin galaxyada yar, ee ku xigta Andromeda, ee la arki karo iyadoon loo baahnayn telescope ama tiknoolajiyad aad u horumarsan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto galaxyada aan caadiga ahayn iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Galaxyo aan caadi ahayn